मनकामना मन्दिर र केबलकार खोल्न स्थानीयको माग | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
मनकामना मन्दिर र केबलकार खोल्न स्थानीयको माग
Published On : ९ मंसिर २०७७, मंगलवार १०:३५
आठ महिनादेखि मनकामना मन्दिर र केबलकार बन्द हुँदा ब्यापार ब्यवशाय चौपट भएको भन्दै त्यहाँका व्यापारी, व्यवसायीले मन्दिर तथा केवलकार खुलाउन माग गरेका छन् । उद्योग बाणिज्य संघ मनकामना बजार ईकाईले ब्यापारी ब्यवशायी र स्थानीयको अनुरोधमा आयोजना गरेको भेलाले तत्काल केबलकार र मन्दिर खोल्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो ।
‘हामीले सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेका हौँ’ मनकामना बजार ईकाईका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले भने ‘स्थानीयले केबलकार खोल्न र ब्यवशाय संचालन गर्न चाहेका छन् ।’ आठ महिनादेखि ब्यवशाय बन्द गर्नुपर्दा ब्यवशायीले ठुलो घाटा ब्यहोर्नु परेको उनले बताए । भेलाले वडा नम्बर २ र ३ लाई पत्राचार गर्दै मनकामना मन्दिर र मनकामना दर्शन प्रालिले संचालन गर्ने केबलकार सुचारु गराउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘केही समयभित्र पहल भएन र खुलेन भने हामी अर्को बिकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा छौँ ।’
मनकामना मन्दिर र केबलकार बन्द हुँदा त्यहाँका ८० प्रतिशत ब्यवशायीको ब्यापार चौपट भएको छ । उद्योग बाणिज्य संघ मनकामना बजार ईकाईका अनुसार ६० भन्दाबढि होटल र अन्य गरी एक सय ५० भन्दाबढि ब्यवशायी मारमा परेका छन् ।
मनकामना बजार क्षेत्रको ब्यवशाय मन्दिर आउने भक्तजन लक्षित हो । केबलकार बन्द भएपछि भक्तजन आउने क्रम घटेको छ । सडकबाटो भएर आउने, पैदल आउनेहरु पनि मन्दिर बन्द हुँदा पुगेका छैनन् । केबलकार बन्द हुँदा स्थानीयलाई आउजाउ गर्न समेत सास्ती भएको छ ।
मनकामना दर्शन प्रालिका स्टेशन म्यानेजर उज्वल शेरचनले स्थानीय सरकार र सर्वसाधारणले अनुमति दिएको एक साता भित्र केबलकार चलाउन सक्ने बताए । ‘हामीलाई केबलकार चलाउन कुनै समस्या छैन’ उनले भने ‘चैत ८ गतेदेखि बन्द गर्नुपर्दा ठुलो घाटा ब्यहोर्नु परेको छ ।’
बिगतमा वार्षिक करिब १० लाख भक्तजनले मनकामना केबलकारको यात्रा गर्थे । यी मध्ये दुई लाख भारतीय पर्यटक हुन्थे । ‘अब खोल्दा पुरानै अवस्थामा आउन अझै धेरै समय लाग्छ’ म्यानेजर शेरचनले भने ‘गत वर्ष वार्षिक ५५ देखि ६० करोडको कारोबार भएको थियो ।’
आठ महिनासम्म बन्द भएको केबलकार पुरानै लयमा फकर्न वर्षौँ लाग्ने अनुमान कर्मचारीहरुको छ । सरकारले मठ मन्दिर, धार्मिक स्थलहरु खोल्न अनुमति नदिएकाले केबलकार आफैँले संचालन गर्न समस्या भएको मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ ।
वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष अचलबाबु थापाले केबलकार खोल्न समस्या नभएको तर मन्दिर खोल्न समस्या भएको बताए । अहिले पनि भक्तजन गाडी र पैदल हिडेर फाट्टफुट्ट आईरहेकाले उनीहरुको सजिलोका लागि केबलकार खोल्न सकिने उनले बताए ।
‘मन्दिर खोल्दा मानिसको आउजाउ बढि हुन्छ, कोरोनाको डर हुने भएकाले भोलिका दिनमा मन्दिर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सन्देश राम्रो जाँदैन’ उनले भने । एक जना मात्र पुजारी रहेकाले भित्रसम्म भक्तजन जाने गरी मन्दिर तत्काल खोल्न नसकिने उनले बताए । बाहिरबाट दर्शन गरेर फर्कने गरी केबलवकार भने संचालन गर्ने विषयमा सरोकारवाला बिच थप छलफल गर्ने तयारी वडा कार्यालयको छ ।